I-SWISSPEAK Resorts Reichenbach Falls kubantu abayi-6. - I-Airbnb
I-SWISSPEAK Resorts Reichenbach Falls kubantu abayi-6.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNathalie - Interhome Group
"I-SWISSPEAK Resorts Reichenbach Falls", i-3-room apartment 61 m2. Impahla yanamhlanje kunye ne-cosy: igumbi lokuhlala / lokutyela elinesofa ephindwe kabini (160 cm, ubude be-200 cm), itafile yokutyela, iziteshi zeTV zamazwe ngamazwe kunye neskrini esicaba. Phuma kwi-balcony, kwi-terrace. Igumbi eli-1 elinebhedi ephindwe kabini (2 x 90 cm, ubude be-2...
...00 cm), ibhafu/WC. Phuma kwi-balcony, kwi-terrace. Igumbi eli-1 elinombhede ophindwe kabini (2 x 90 cm, ubude be-200 cm). Phuma kwi-balcony, kwi-terrace. Ikhitshi elivulekileyo (i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, iihotplates zeglasi ezi-4 zeceramic, umatshini wekofu wombane, iiCapsules zomatshini wekofu (Nespresso) ezongezelelweyo). Ishawari/WC. Ukufudumeza umgangatho ophantsi. Imigangatho yeParquet. Ibhalkhoni engama-22 m2, indawo ejonge kumzantsi-ntshona okanye ithala leemitha ezingama-25 m2, indawo ejonge kumzantsi-ntshona. Ifenitshala yeTerrace, ifenitshala yebalcony. Umbono weentaba. Izixhobo: isomisi seenwele. I-Intanethi (iWiFi, yasimahla). Nceda uqaphele: ilungele iintsapho. Indlu engatshaywayo. 1 isilo-qabane/inja evumelekileyo. Ialam yomsi. Ipropati yenye yodidi lwepropati okanye ifulethi. Iseti ye-fondue (ukudibana okanye ushizi) kunye ne-raclette grill inokuboleka kwi-reception ngokuchasene nediphozithi.
Umntwana onobubele, wanamhlanje, ukhululekile kakhulu "i-SWISSPEAK Resorts Meiringen", i-600 m a.s.l., i-4 storeys, eyakhiwe ngo-2019. Izindlu ezi-6 kwindawo yokuphumla. 79 amagumbi kwindawo yokuhlala. Embindini weMeiringen. Ukusetyenziswa okwabelwanayo: ipaki enezityalo, i-meadow. Indawo yokudlala yabantwana. Kwi-complex: i-reception, ibha, i-lounge, i-bistro, i-WiFi, i-sauna, igumbi lokuphumla, igumbi lokudlala, i-lift, indawo yokugcina iibhayisikile, indawo yokugcina i-skis, inkqubo yokufudumala ephakathi, umatshini wokuhlamba (owongezelelweyo), i-tumble dryer (ukusetyenziswa ngokubambisana, eyongezelelweyo). Ukutshintsha ilinen (ukubonelela. Intlawulo eyongezelelweyo). Ukufikelela kweemoto endlwini. Indawo yokupaka (inani eliqingqiweyo lezithuba, ezongezelelweyo), indawo yokupaka egqunyiweyo yoluntu (eyongezelelweyo) endlwini, indawo yokupaka yoluntu 600 m eyongezelelweyo. Ubungakanani: ubude be-210 cm. Isikhululo sokutshaja isithuthi sombane. I-Supermarket 400 m, indawo yokutyela, ibha ye-50 m, i-bakery, i-café 200 m, isikhululo sikaloliwe "Meiringen" 200 m, ichibi lokuqubha langaphandle 800 m, ichibi lokuqubha langaphakathi 400 m, ichibi lokuhlamba "Hasliberg" 14 km. Ikhosi yegalufa (i-18 hole) i-33 km, i-tennis, isikhungo se-tennis yangaphakathi 800 m, ukukhwela i-10 km ezinzileyo, iindlela zokuhamba ukusuka kwindlu ye-50 m, i-cable car 1 km, i-ski bus stop 100 m, i-ski track 14 km, indawo yokudlala yabantwana. 100 m. iindawo ezikufutshane: Sherlock Holmes Museum 50 m, Reichenbach Falls 1.3 km, Aareschlucht 1.6 km, Freilichtmuseum Ballenberg 9 km, Brienzer Rothorn 13 km, Interlaken 28 km. Imimandla eyaziwayo ye-ski inokufikelela ngokulula: i-Meiringen-Hasliberg i-1 km, i-Schilthorn i-44 km, i-Jungfrau Region 47 km. Amachibi awaziwayo anokufikelela ngokulula: Brienzersee 12 km, Gelmersee 22 km, Thunersee 33 km. Iindlela zokuhamba: Hasliberg 1 km, Rosenlaui 12 km. Nceda uqaphele: ilungele iintsapho. Umzila kaloliwe 20 m ukusuka kwipropati. I-Airfield 6 km ukusuka kwipropati. Ifoto ngumzekelo nje. Indawo yeeholide yavulwa ngoDisemba 2019. Inika inani elilinganiselweyo lokupaka ngaphantsi komhlaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Nathalie - Interhome Group
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Meiringen